बीजेपीलाई आरामदायी बहुमत - BBC News नेपाली
बीजेपीलाई आरामदायी बहुमत
Image caption बीजेपीका समर्थकहरुले देशभर खुशीयाली मनाएका छन्
छिमेकी मुलुक भारतको आमचुनावमा हिन्दु राष्ट्रवादी दल भारतीय जनता पार्टी बीजेपीले पछिल्लो तीस वर्षकै ऐतिहासिक जीत हात पार्दै सरकार निर्माणका लागि आरामदायी बहुमत ल्याएको छ।
कतिपय स्थानमा घोषणा भएको मतपरिणाम तथा हाल जारी मतगणनाका अनुसार बीजेपी नेतृत्वको गठवन्धन नेशनल डेमोक्रेटिक एलायन्स (एनडीए)ले ५४३ सदस्यीय तल्लो सदनमा ३३५ स्थान ल्याउने देखिएको छ।
जसमा बीजेपी एक्लैले सामान्य बहुमतका लागि आवश्यक २७२ भन्दा बढी स्थानमा जीत हासिल गरेको छ।
पछिल्लो दशवर्ष मुलुकको बागडोर सम्हालेको कंग्रेसले ५० स्थान पनि नल्याउने देखिएको छ।
बीजेपीको ऐतिहासिक जीतका पछाडि उसका प्रधानमन्त्री पदका प्रत्यासी नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियतालाई प्रमुख कारण मानिएको छ।
तपाईहरुलाई थाहा छ? तपाईहरुले भारत स्वतन्त्र भएको ६० वर्षको इतिहासमा एउटा नयां अध्याय लेख्नुभएको छ। तपाईहरुले के गर्नुभयो भनेर जुन मैले देखे त्यो शायद अहिले पनि सञ्चारमाध्यमहरुले देखेका छैनन् होला।
नरेन्द्र मोदी, बीजेपीका प्रधानमन्त्री प्रत्यासी
सन् १९८४ मा राजीव गान्धीको नेतृत्वमा कंग्रेसले ४१५ स्थानमा जितेपछिको तीस वर्षमा कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन सकेको छैन।
अब त्यो क्रम यसपटकको भारतीय आमचुनावमा बीजेपीले तोड्ने निश्चित देखिएको छ।
यस्तो जीततर्फ उन्मुख हुंदै गर्दा बीजेपीका प्रधानमन्त्री प्रत्यासी एवम् गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्दै पछिल्लो नतिजालाई भारतीय इतिहासको नयां अध्याय भनी टिप्पणी गरे।
उनले भने,"तपाईहरुलाई थाहा छ? तपाईहरुले भारत स्वतन्त्र भएको ६० वर्षको इतिहासमा एउटा नयां अध्याय लेख्नुभएको छ। तपाईहरुले के गर्नुभयो भनेर जुन मैले देखें, त्यो शायद अहिले पनि सञ्चारमाध्यमहरुले देखेका छैनन् होला।"
पछिल्लो दुई कार्यकाल सत्ताको तालासाँचो बोकेको कंग्रेस, आफ्नो करीब एक शताब्दी लामो जीवनकै सबैभन्दा नराम्रो ठानिएको पराजय उन्मुख देखिएको छ।
आफ्नो शासनकालमा विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणले घेरिएको कंग्रेसले मतपरिणामको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी रहेपनि हार स्वीकारिसकेको छ।
उसको चुनावी अभियानको नेतृत्व गरेका कंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गान्धीले भने, "मेरोतर्फबाट भन्ने हो भने कंग्रेस पार्टीले चुनावमा ज्यादै नराम्रो गरेको छ। पार्टीको उपाध्यक्षको हैसियतमा यो हारको जिम्मा म लिन्छु।"
मेरोतर्फबाट भन्नेहो भने कंग्रेस पार्टीले चुनावमा ज्यादै नराम्रो गरेको छ। पार्टीको उपाध्यक्षको हैसियतमा यो हारको जिम्मा म लिन्छु।
राहुल गान्धी, उपाध्यक्ष, भारतीय कंग्रेस
आमचुनावमा कंग्रेसले मात्रै होइन, केही क्षेत्रीय शक्तिहरुले पनि नराम्रो हार व्योहर्ने देखिएको छ।
उत्तरप्रदेशको मायावती नेतृत्वको बहुजन समाज पार्टी, तमिलनाडुको डीएमके तथा जम्मु कश्मिरको नेशनल कन्फेरेन्सले खाता खोल्न सकेका छैनन्।
तर जयललिता नेतृत्वको तमिलनाडुको दल एडीएमके, ममता बनर्जीको तृणमूल कंग्रेस र नवीन पटनायकको बिजु जनतादलले विगतको तुलनामा निकै राम्रो गरेको देखिएको छ।
वाम दलहरु तथा मुलायमसिंह यादवको समाजवादी पार्टी भने १० भन्दा कम स्थानमा सीमित हुने लक्षण छ।
त्यस्तै निकै चर्चा बटुलेको र दिल्ली विधानसभा चुनावमा ऐतिहासिक प्रदर्शन गरेको अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आमआदमी पार्टीले जम्मा चार सिटमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।